Chigadzirwa Kuvandudza - Chapman Technology Co., Ltd.
At Chapman Muiti, isu tinonzwisisa kukwikwidzana kwechiso chedu chebhizinesi shamwari mumaindasitiri mazhinji. Isu vatinoshanda navo bhizinesi vakaverenga pane yedu ine ruzivo timu yeinjiniya kweanoda kusvika makumi mashanu emakore kutsigira makwikwi avo.
Isu tinotarisisa kukurukurirana nguva dzese mukuita kwese, kusanganisira danho rekugadzira, kuve nechokwadi chekubudirira kweshamwari yebhizinesi redu. Akazvipira Programme Manager anopihwa kune yega yega chirongwa. Kuburikidza nemazano evanoshanda navo, timu yedu yehunyanzvi inogona kupa dhizaini uye kuvandudza kwechose chigadzirwa chigadzirwa uye chirongwa chekushandisa. Izvi zvinoona vatinoshanda navo iwo akanyanya mwero wehunhu, kugona uye nemutengo unoshanda kune chimwe nechimwe chinhu chakagadzirwa.
Chikwata chedu chinotenda matanho ese mukusimudzira uye kugadzirwa kwekushandisa kwakakosha. Tinoshanda pamwe nevatinoshanda navo bhizinesi kuti tione kubudirira mune yega yega nhanho. Kutarisisa kwedu kusimudzira kwechigadzirwa, dhizaini yekugadzira uye kushandiswa kweiyo chakuyerera kuyerera uye kuongorora uye kugadzira dhizaini kunopa vatinoshanda navo nemakwikwi kumucheto kubva pakutanga.
Chero danho rauri iwe panguva yekugadzirwa kwechigadzirwa timu yedu yakagadzirira kubatsira uye nekuita kurudziro yezvako dhizaini yekudzora kuumba uye yechipiri mari yebasa.
Takashanda nevatengi kugadzira zvigadzirwa mune mamwe eminda inotevera:
1. Mitambo nekunze
2. Kufamba / Kuwanika
3. Hutano / Hutano
4. Zvishandiso Zvemaindasitiri
5. Maindasitiri Mashini
Chekutanga nhanho: Pfungwa - Iyo purojekiti inotanga nepfungwa yako yechigadzirwa. Ngatibatsirei iwe kutsanangura mashandiro ayo akakosha uye tione nzira iyo inoshanda zvakanyanya kune yako tarisiro musika. Tichaisawo mabenchmark uye tofunga kuongorora aripo epfuma chivakwa.
Nhanho yechipiri: Yakadzama Kuferefeta- Patiri isu kuona ID yechigadzirwa chitsva, bhizinesi redu rekushambadzira timu inofanirwa kuita tsvakiridzo yemusika kuona kuti chigadzirwa chedu chinosangana nemamiriro aripo emusika uye kudiwa kwemusika. Zvinoenderana nemhedzisiro yekuongorora kwedu pamusika, isu tichagadzirisa uye kusimudzira chigadzirwa chigadzirwa, mashandiro, uye kubvumidza zvigadzirwa zvedu kuti zvipinde mumusika nekukurumidza kutengeswa.
Nhanho yechitatu:Dhizaini - Kugadzira chakanakisa chigadzirwa chako bhizinesi modhi, isu tinofanirwa kushandisa dhizaini-yeku-kugadzira (DFM) nzira kuitira kuti kugadzirwa kunyatsoita sezvinobvira. Mafungiro anotora chimiro mumapurogiramu edu e3D, uye isu tinogona kuita sarudzo nezve maficha, fomu chinhu, uye zvigadzirwa. Isu tinowirirana munzira inonzwisisika kumberi kune chako chigadzirwa usati waenderera kune chikamu chekuvaka.
Nhanho yechina:Prototype - Munzvimbo yedu yakazara-akashongedzerwa, tinogona kucheka, chigayo, kugadzira, kudhinda kwe3D, waya, uye kuronga chikamu chimwe nechimwe chikamu usati waunganidza prototype yako. Chikamu chekuratidzira chinogona kudzokorora sezvo akasiyana magadzirirwo achifungidzirwa uye kuyedzwa.
Nhanho yechishanu:Kugadzira - Sevanyanzvi mukugadzira, otomatiki, uye maindasitiri maitiro, isu tinokubatsira iwe kugadzira chako chigadzirwa nekuyera mupfungwa kuti ushandise mikana yekuchengetedza pasi pemugwagwa. Kugona kwedu-kweimba kunotibvumidza kuzadzikisa kumwe kumhanya kwekugadzira.
Nhanho yechitanhatu:Dhirivhari - Chizvarwa chekutanga chechigadzirwa chako chakagadzirira kugadzirwa uye musika. Iwe unenge uine yakakwana dhizaini package, prototypes, uye zvingangoita diki kumhanya muchitoro. Iwe zvakare uchave nerutsigiro rwedu paunofamba nhanho dzinotevera.
Izvo zvakakosha kuti uongorore bhizinesi kesi uye "bhizinesi kukosha" kana uchigadzira chigadzirwa. Chikwata chedu chinokubatsira zvakavanzika kuti uongorore kugona nekukurumidza uye nekukutungamira kuburikidza nekuongorora dambudziko iro dambudziko rako rinotarisira kugadzirisa.